Ahoana no hanovana ny fiainanao ho tsara kokoa: Ireo làlana 2 ihany no azonao raisina - Blog
Noho izany, tonga ny fotoana hanaovana fanovana fanovana izay tena manisa.
Isika rehetra dia manao safidy kely sy fanovana kely eo amin'ny fiainantsika isan'andro nefa tsy mahatsikaritra ny fomba fanangonan'izy ireo sy mamaritra ny làlan'ny fiainantsika.
Na dia mihodina kely foana aza isika ary tsy mandeha amin'ny tsipika mahitsy tanteraka, dia tonga eny amin'ny sampanan-dalana izay tsy azontsika tsinontsinoavina fotsiny.
inona no hatao amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ilay sakaizanao
Amin'ny teboka samihafa amin'ny fiainantsika dia afaka mandray fanapahan-kevitra tsy tapaka isika hanohy ny lalana nodiavintsika hatreto, na handray anjara, handray fanapahan-kevitra misy heviny sy manan-danja ary manomboka manao zavatra hafa.
Misy, fomba roa, manova ny fiainanao ho amin'ny fomba roa tsara kokoa handaozana ny lalana andehananao ankehitriny.
Ny voalohany dia ny fivoahana tampoka sy manaitra mba hiviliana amin'ny zoro ankavanana ary hitsambikina avy eny amin'ny hantsana. Ity dia fiovana mahery vaika sy eo noho eo izay tsy misy fiverenana. Tsy hitovy intsony izao ny raharaha.
Ny faharoa dia ny mandeha amin'ny làlana iray izay miala amin'ny sisiny kely fotsiny amin'ny voalohany, miadana miadana nefa azo antoka miondrika mandra-pahatongan'ny farany mandeha amin'ny lalana hafa mihitsy.
Ireo fanovana ireo dia mety hitranga amin'ny endrika na endriny rehetra. Mety mieritreritra ny hiova asa ianao na hanova tanteraka ny sehatra na koa mamarana ny fifandraisana (na tantaram-pitiavana na Platon ).
Azonao atao ny miala amin'ny fitondran-tena manimba, na mandray zava-baovao. Mety fiovana mahery vaika amin'ny fomba fiainana na fanovana sakafo.
Tsy miresaka isan'andro izahay, fanapahan-kevitra humdrum, fa ny zavatra izay hidika amin'ny fiainanao isan'andro dia hitovy tsy mitovy amin'ny fomba nataony taloha.
Fa iza no làlana mety aminao, ary tsara noho ny iray foana ve ny iray? Andao hojerentsika akaiky ireo fomba roa hanovana ny fiainanao.
Safidy 1: Raiso haingana
Ity no safidy radika, ary tsy azo atao amin'ny antsasaky ny refy.
Azonao atao ny manandrana mihanika ilay hantsam-bato fa tsy mitsambikina avy eo, fa mety ho very ny fihazonana anao ianao ary hianjera ihany.
Ity no fomba fanonganana ny plastika.
Ny momba ny fanapahana fatorana sy ny fanovana lehibe toy izany amin'ny fiainanao dia tsy manan-tsafidy intsony ianao fa tsy ny hifanaraka haingana mba ho tafavoaka velona. Tsy maintsy mitady fomba hamoronana parasyute anao ianao raha tsy te-hidona amin'ireo vato.
ny fomba hahatonga azy hanina anao toa adala
Ity karazana fanovana ity dia mety misy endrika maro. Mety hiala amin'ny asanao izany raha tsy misy drafitra miverina. Mety mividy tapakila fiaramanidina mandritra ny iray volana izy, mivarotra, ary mankeny amin'ny kijana vaovao nefa tsy misy afa-tsy kitapo sy nofy.
Ny zava-dehibe tokony ho tsapanao momba ny fakana an'ity safidy ity dia rehefa mitsambikina voalohany ianao dia mety hikapoka vato vitsivitsy eny am-pidina. Tsy hisokatra avy hatrany izany parasyute izany. Rehefa hitanao fa manonja ny moron-dranomasina, dia terena ianao hitady fomba hisidinana, ary hanao izany ianao.
Ireo izay mivoatra amin'ity fanovana ity dia mazàna miasa tsara amin'ny tsindry. Afaka mahatratra zavatra izy ireo rehefa milatsaka ny chips izay tsy ho hitany mihitsy ny antony manosika azy ireo raha nandray ny lalana miadana sy maharitra izy ireo, satria hirenireny ny sain'izy ireo ary ho very ny fifantohany amin'ny tanjon'izy ireo farany.
Safidy 2: Miadana ary milamina
Rehefa mitady hanodina ny fiainanao tanteraka ianao ary handray làlana hafa, dia mandresy amin'ny hazakazaka ho an'ny olona sasany ny miadana sy miadana.
Ity fomba ity dia mirona hiasa tsara ho an'ireo izay manana fientanam-po sy fanoloran-tena ary afaka alao sary an-tsaina ny tanjon'izy ireo maharitra , mandray dingana miadana mankany amin'izy ireo soa aman-tsara amin'ny fahalalana fa, na ho ela na ho haingana, ho tonga any izy ireo.
Ity dia fanovana miandalana kokoa izay mifototra amin'ireo zavatra efa fanaonao isan'andro. Raha tokony hanova tanteraka ny fiainanao ianao ary manomboka indray dia mampiditra tsimoramora ireo fahazarana vaovao izay, amin'ny farany, dia midika fa ny fiainanao isan'andro dia toa tsy mitovy amin'ny fomba fiainany ankehitriny.
Raha ny fiovana misy dikany izay tadiavinao hatao amin'ny fiainanao dia zavatra toy ny fiovan'ny sakafo, dia mazàna tsara indrindra ny manao io fomba fiasa io.
Ny fanovana tanteraka ny sakafonao amin'ny andro iray ka hatramin'ny manaraka dia tsy hevitra tsara ho an'ny rehetra, satria mila manokana fotoana hanaovana fikarohana sahaza ianao, mahita ny sakafonao ankafizinao vaovao, ary hamerina ny vata fataranao.
Amin'ny tranga sasany, ny fanovana mitovy amin'izany dia mety ho tratra amin'ny fomba roa.
Tahaka ny azonao anolorana ny fampandrenesanao sy hampandehanana azy io dia mety manapa-kevitra ianao fa ny làlana mandroso ho anao dia ny fanombohana ny fihazakazahana amin'ny takariva sy amin'ny faran'ny herinandro, miaraka amin'ny tanjona maharitra amin'ny farany hanome ny fampandrenesanao ny taona manaraka indray mandeha fantatrao fa afaka mamelon-tena ianao.
Ho an'ny sasany, ity fomba efa nomanina sy voafehy ity no fomba tokana anaovana fahombiazana azy, raha ny sasany kosa ho lany haingana etona raha tsy mahatsapa ny fanerena izy ireo.
Ahoana ny fomba handresena ny tahotra fanovana ary hiatrika fahasahiranana amin'ny fanamby vaovao
Iza no lalana ho anao?
Zava-dehibe ny mahatadidy fa ny iray amin'ireo lalana etsy ambony ireo dia tsara kokoa noho ny iray hafa. Mifanohitra izy ireo, fa samy tsy misy ambony. Tsy marina ihany koa fa ny olona iray dia hanao hetsika mitovy foana na inona na inona toe-javatra natrehin'izy ireo.
Ny làlana nofidinao dia misy ifandraisany amin'ny fihetsikao manoloana ny risika, ka ny sasany amintsika dia mety ho vonona kokoa handray ny làlana ‘azo antoka’.
Ahoana no mba hilaza ny lehilahy ny fihetseham-ponao
Raha toa ianao ka iharan'ny risika voajanahary, ny fanalana ny safidy 'mitsambikina avy amin'ny hantsana' dia mety ho toa tsy hevitra tsara mihitsy, na inona na inona tianao ho tratrarina.
Etsy ankilany, ny fanapahan-kevitsika dia voafaritra ihany koa amin'ny toe-javatra sy ny fanovana tiana hatao. Ohatra, raha misy fiantraikany eo aminao manokana ny fandraisana fepetra iray, dia manana fahalalahana bebe kokoa ianao hanaraka ny làlan-kizorana.
Raha, na izany aza, ny fiovana tadiavinao hatao ho anao dia hidika koa ny fanovana ho an'ireo manodidina anao, ny làlana goavambe dia mety tsy ho safidy, arak'izay itiavanao azy ary araka izay itiavan'ny toetranao ny manetsika.
Ny milaza an'izany, na izany aza, indraindray dia tsara kokoa amin'ny olon-kafa voarohirohy raha vita tanteraka izany. Raha ny fanovana tianao hatao dia ny fampitsaharana ny fifandraisana amam-pitiavana, ohatra, dia tsy zavatra tokony hotadidina velively izany. Tokony hatao haingana, tsara fanahy ary mazava.
Ambonin'izany, tsy maintsy dinihinao fa ny fiovana lehibe sasany amin'ny fiainanao dia tsy maintsy atao amin'ny fomba iray.
Ohatra, raha te hifindra any amin'ny toerana lavitra ianao, matetika dia tsy azo atao ny manomboka amin'ny fitsidihana fohy ary avy eo mandany fotoana bebe kokoa any alohan'ny hifindranao hidy, tahiry ary barika. Mila manangona kitapo fotsiny ianao, mitaingina fiaramanidina, ary avy eo mamantatra ny fiainana any amin'ny faran'ny hafa.
Indraindray ny toe-javatra dia hanery ny tananao, ary indraindray ianao dia hanana safidy lafo vidy.
Tsy misy valiny mety
Araka ny efa tsapanao ankehitriny, tsy inona izany fa mainty sy fotsy. Raha tonga tamina valiny mivaingana ianao dia tsy hahita. Misy zavatra sasany izay tsy azon'i Google manapa-kevitra ho anao. Mbola tsy izany ihany.
Mila mijery jery todika ny toe-javatra iainanao manokana ianao ary mamantatra izay mety aminao. Na dia tokony hihevitra ny olon-kafa foana aza ianao, indraindray dia mila mitaky fitiavan-tena kely ianao raha te hanao fanovana ho amin'ny tsara kokoa amin'ny farany.
Na mitsambikimbikina ianao na manao dingana kely fotsiny amin'ny lalana hafa dia aza mijanona mandroso mihitsy.
inona no famantarana fa tian'ny ankizivavy ianao
fomba fiasa mafy hahazoana
rehefa mahatsapa ianao fa namadika anao ny namanao
inona no hatao rehefa mankaleo fiainana ianao
lisa bonet sy jason momoa